စနေလင်း| November 2, 2012 | Hits:7,944
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment david November 2, 2012 - 7:59 pm	ကိုယ်ဗလီကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ လာပြီးမီးရှိုးပျက်စီးရင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို. တုတ်